प्यारालाइसिस रोगका कारण आपाङ्ग भएका पृर्थबहादुर मगरको घर बनाउन सहयोगको अपिल गर्दै वडा अध्यक्ष कार्की
प्यारालाइसिस रोगका कारण आपाङ्ग भएका पृर्थबहादुर मगरको घर बनाउन सहयोगको अपिल गर्दै वडा अध्यक्ष कार्की सहयोगको लागि सम्पर्क नम्वर ९८६२८४२६१७ र ९८६३८६८५२७
जनभाव सोमबार, फागुन ९, २०७८
उदयपुर । खरको पुस्को छानो भएको झुप्रो घर । घर भित्र स–सना बालबच्चाहरु अगेनाको डिलमा बसेर बुवा पृर्थबहादुर मगरलाई टुलुटुली हेरेर बसिरहेका छन् । पृर्थबहादुरको झण्डै एक दशकदेखि शरिरको कम्मरको भागमा प्यारालाइसिस भएका कारण चल्दैन् । उदयपुरको उदयपुरगढी गाउँपालिका वडा नम्वर ३ साइपाका पृर्थबहादुर प्यारालाइसिस रोगका कारण अपाङ्ग भएको एक दशक पुगिसेको छ । प्यारालाइसिसको कारण जब कम्मरको भाग नचल्ने भएर ओछ्यानमै थाला परे । त्यसपछि उपचारको लागि गाउँ घर मै धामी झाँक्री लगाइयो ।
आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण उपचार गर्न नपाएको गुनासो विरामी पृथबहादुरले आँखाभरी आँशुका धारा चुहाउँदै छोराछोरी तर्फ हेर्दै भन्नुभयो, ‘एक्कासी ढाड नचल्ने भयो, सुरु सुरुमा धामीहरु बोलाएर घरमै उपचार गरेँ । गाउँभन्दा बाहिर जानलाई साथमा पैसा थिएन । यसो गाउँ घरमा ऋण गरेर कटारी अस्पतालदेखि लाहनसम्म पुँगे । डाक्टरहरुले प्यारालाइसिस हो भने । उपचार गर्नको लागि काठमाडौं वा विराटनगर जान सल्लहा दिए । तर, पैसा नभएकाले जान सकिन ।’ अहिले नौ वर्ष भयो, ओछ्यामै थला परेर बसिरहेको छु ।’
जाय जेथाको नाममा पाखो बारी र दुई चारवटा गाई र बाख्राहरु छन् । पुस माघको चिसो जाडो घर भित्र घुस्छ । बर्खाको पानी बाहिर नगएको कति वर्ष भइसक्यो । आँशुका धार चुहाँउदै मगर भन्नुहुन्छ, ‘मेरो जिन्दगी नौ वर्षदेखि यही थोत्रो बलाङ्केट भित्र सुतेर बितेको छ ।’ न दिशा पिसाव गर्न बाहिर जान सक्छु । न बाहिर कस्तो छ, हेर्न सक्छु । अहिले उनलाई नजिकै ढोका पनि कोशौँ दुरीको पहाड लाग्न थालेको छ । दिशापिसाव गर्न पनि छोराछोरी र श्रीमतिको सहयोग चाहिन्छ ।
पृर्थबहादुर मगरका पाँच भाइ छोरा र तीन बहिनी छोरीहरु छन् । जेठी छोरीको विहे भइसकेको छ । जेठो र माइलो छोरो कामठमाडौंमा ज्यामी काम गरेर चामल, नुन, तेल खाने पैसा पठाउँछन् । त्यही पैसाबाट घर खर्च चल्ने गरेको पृर्थबहादुर श्रीमति हिरामाया मगर बताउँछिन् । ‘अलि अलि उहाँको अपाङ्गता भत्ता आउँछन, अनि दुई छोराहरु काठमाडौंमा छन् । उनिहरुले पठाएको पैसाको घरमा घर खर्च चलाउनु परेको छ ।’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘यसो कहिले काँही गाउँ घरको मेला पात गएर घर खर्च जोहो गर्ने गरेको छु । उहाँलाई (श्रीमान) छाडेर टाढा/टाढा ज्याला मजदुरी गर्न जान सक्ने अवस्था छैन्, उहाँलदाई एक जनाले घरमै कुरेर बस्नु पर्छ । दिशा, पिसाव घर भित्र गराउनु पर्ने बाध्यता छ ।’
श्रीमानको शारिरिक अवस्थाको दुखेसो गर्दै हिरामाया भन्छिन्, ‘सुनेको थियौं, गरिब, असहायलाई सरकारले उपचार गरिदिन्छ रे ! त्यो सरकार कहाँ भेटिन्छन, थाहा छैन् ? हामीलाई पनि सरकारले यसो उपचारमा सहयोग गरे उहाँ (श्रीमान) को विरामी ठिक हुने थियो की ?’ हिरामायले अझै सरकारको आश मारेकी छैनन् । उनले भनिन्, ‘उपचारमा कसै कसैले सहयोग गरिदिए हाम्रो परिवारमा पनि खुसी आउने थियो की ?’ उनले आफुहरुको घर वडा कार्यालयले बनाइदिने भन्ने सुनेको पनि बताइन् ।
घर बनाउन सहयोग संकलन गर्दै वडा अध्यक्ष कार्की
विरामी पृर्थबहादुर मगरलाई तत्काल अपाङ्गमैत्री घरको आवश्यक रहेको छ । त्यही भएकाले आपङ्गमैत्री घर बनाउन अहिले वडा कार्यालय जुटेको छ । उदयपुरगढी गाउँपालिका वडा नम्वर ३ का वडा अध्यक्ष मनोजकुमार कार्की अहिले घर बनाइदिन सहयोग संकलन गर्न आफुहरु जुटेको बताउनु हुन्छ । वडा अध्यक्ष कार्कीले पहिला विरामी मगरलाई अपाङ्गमैत्री घर बनाउन सहयोग गर्ने छौँ, त्यसपछि उपचारको लागि अन्य बाटाहरु खोज्ने छौँ ।’
वडा अध्यक्ष कार्कीले वडा कार्यालयबाट जस्तापता, सिमेन्ट लगायतको लागि केही बजेट व्यवस्था गरेको र केही रकम अपुग भएकाले सहयोग संकलनको लागि अपिल गरेको बताउनु भयो । ‘जे जस्तो भएपनि एउटा अपाङ्गमैत्री पक्की घर बनाउने सोचमा छौँ, केही रकम वडाबाट विनियोजन गरेका छौँ, केही अपुग भएकाले सहयोगको लागि अपिल गरेका छौँ ।’
विरामी मगरको घर बनाउनको लागि वडाध्यक्ष लगायतको एउटा टोलीले उदयपुरगढी गाउँपालिका बुद्धिजीवि, जनप्रतिनिधि लगायतसँग सहयोग मागिरहेको छ । यदी कसैले सहयोग गर्न चाहेको खण्डमा वडा अध्यक्ष मनोजकुमार कार्कीको नम्वर ९८६२८४२६१७ र पत्रकार होमबहादुर बस्नेतको नम्वर ९८६३८६८५२७ मा फोन गरेर सहयोग उपलब्ध गराउन सकिने पनि वडा अध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ । ‘हामीले वषौँदेखि उपचार नपाएर थाला परेका एक विरामीको उपचारको लागि र तत्काल बास बस्ने आपङ्गमैत्री घर बनाउन सहयोग संकलन गरिरहेका छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हजुरले गरेको जति सहयोग पनि हामी ग्रहण गर्न तयार छौँ ।’
प्रकाशित मिति: सोमबार, फागुन ९, २०७८, १०:४२:००